Dhadhaab: Qaxooti iskood ugu ambabaxay Baay
Photo | Qaxootiga oo isku diyaarinaya inay baxaan /Axmed-Nuur/Ergo
Cabdiraxmaan Taysiir 11 January, 2016 DADAAB
(ERGO) - Afartan qoys oo ka kooban 220 qof oo ahaa qaxooti Soomaali ah ayaa Sabtidii ka baxay xeryaha Qaxootiga Dhadhaab ee Waqooyi-bari Kenya oo ay ku noolaayeen sanadihii la soo dhaafay, iyagoo ku noqonaya magaalooyinka Baydhabo iyo Diinsoor ee gobolka Baay oo markii hore ay ka yimaadeen.
Qoysaska ayaa intooda badan ka soo qaxay abaartii sanadkii 2011 ku dhufatay Soomaaliya. Waxay noqonayaan tiradii ugu badneyd oo isku mar ka baxda xeryaha. Waxaa lagu daabbulay shan bas oo geynaya ilaa xudduudda Soomaaliya, halkaas oo ay ka sii kireysan doonaan gawaari.
“Markii hore duruuf baa na keentay, haddana gaajo ayaa xeryaha nagu qabsatay oo raashinkii waa la dhimay,” ayuu yiri Cabdinuur Aadan Cismaan oo qoyskiisa oo ka kooban 6 qof uu ka mid yahay qoysaska galaya safarka dib u noqoshada. Wuxuu rajo ka muujiyay in uu Soomaaliya ka heli doono nolol ka wanaagsan tii uu ku haystay xeryaha.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa qof kasta oo dadkaas noqonaya ka mid ah siisay lacag gaari-raac ah oo gaaraysa $120 oo dadka waaweyn ah iyo $60 oo carruurta la siinayo. Hay’adda ayaa sidoo kale dadkaas ku caawisay gogosha lagu seexdo, maro-kaneecooyin, buskut, maacuun iyo agab kale oo loogu talagalay inay u kaalmeystaan noloshooda cusub.
Maxamed Saney Nuur oo 8 sano ku noolaa xeryaha ayaa ka mid ah dadka noqonaya. Wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay inuu iskiis u go’aansaday inuu dib ugu noqdo degmada Diinsoor ee gobolka Baay oo markii hore uu ka yimid, kaddib markii uu dareemay inuu soo hagaagay ammaanka Soomaaliya.
Muna Ibraahim Cali oo ah hooyo 6 carruur ah haysata oo toddobadii sano ee la soo dhaafay ku nooleyd Dhadhaab ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in marka ay ku noqoto Diinsoor ay rajeynayso inay ku shaqeysato xirfadda harqaan-tolista oo ay baratay intii ay xeryaha qaxootiga ku ahayd.
Qoysas kale oo isdiiwaangeliyay ayaa lagu wadaa inay berri ka baxaan xeryaha, iyadoo uu qorshuhu yahay inay markiiba is raacaan qoysaska isku magaalada u noqonaya, sida uu Raadiyo Ergo u xaqiijiyay Aadan Rashiid Cabdi oo ah madaxa barnaamijka dib-u-celinta qaxootiga ee UNHCR.
Tan iyo bishii Disember ee sanadkii 2014 waxaa Soomaaliya iskood ugu noqday 6320 qof oo qaxooti ah oo ku noolaa Dhadhaab. Tallaabadaas ayaa qeyb ka ah heshiis saddex-geesood ah oo dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo UNHCR ay kala saxiixdeen bishii Nofeember ee sanadkii 2013.
(Axmed-Nuur Maxamed Cabdullaahi/AT)